रिमा विश्वकर्मा उनकी बेस्ट फ्रेन्ड केकी अधिकारीझैँ जुनसुकै विषयमा पनि राय व्यक्त गरिहाल्दिनन्। ‘मीटू मुभमेन्ट’मा चर्कंदाचर्कंदै आफैँ फोहोरी अर्थ लाग्ने ‘घाँटीभन्दा मुनि’ बोलको गीतमा अभिनय गर्न पुगिन्। यसले महिलासम्बन्धी मुद्दामा बोल्ने उनको बाटै बन्द भयो। त्यो प्रकरण मान्छेले बिर्संदै थिए, लकडाउनको समयमा कालो चिया पकाउन सिक्दै गरेको काण्ड भाइरल भयो। केही दिनलाई यहाँ पनि रिमाको बोली बन्द भयो। तर, बोलेरै जीविकोपार्जन गर्ने रिमा धेरै दिन नबोली किन बस्न सक्थिन् ?
उनले महिलामाथि हत्या, हिंसा र अपराध भइरहँदा मौन मानिसहरू महिलाको देखिएको ‘ढाड’ र फरक तीज गीतको शैलीको बहसमा लागेको भन्दै आक्रोश पोखेकी छन्। उनले निर्मला पन्तदेखि एसिड पीडित युवतीसँगै गीता ढकालसम्मले न्याय नपाएको विषयमा मानिसले आवाज नउठाएको आरोप लगाएकी छिन्। रिमाको कुरा सोह्रै आना सही हो।
अन्यायमा परेका धेरैले न्याय पाउनुको सट्टा झन् अन्याय खप्नुपरेको छ। तर, नबोल्ने कुरामा त रिमाहरूमाथि पनि धेरैले औँला उठाउने गरेका छन्। त्यसमा पनि ‘सिलेक्टिभ एक्टिभिजम’ गरेको आरोप लागेको छ। जस्तो किः दीपाश्री निरौलाका लागि बोल्ने, तर साम्राज्ञीका लागि नबोल्ने ?
यस विषयमा पनि रिमाको आधिकारिक धारणा आए हुन्थ्यो।